Miala any indray ny fifidianana asafelipelika | SEFAFI
Efa notakiana hatry ny ela ny fifidianana ben’ny tanàna ary mety ho tante-raka ihany amin’ny zoma 31 jolay2015 araka ny voalaza. Hita aloha fa ny tena nahasarika kokoa ny sain’ny mpanao gazety dia tsy io mihitsy fa ny fihamba-hambana efa ho lava ataon’ny fitondrana fara tampony sy ny kajikajy politika isan-karazany, satria mantsy io angamba no mety hahitana marina izay tena herin’ny mpifanandrina samihafa manoloana ny fifidianana : zaran’ny antoko sy ny kandidàny koa aza misy an’izany amin’izay izy tsy voatery hiresaka izay programan’asany sy ny hevitra politika ijoroany.
Ny fangatahana fanonganana sy fitsipaham-pitokisana farany teo dia nampi-seho izay maro an’isa ao amin’ny Antenimiera. Hijanona ho maro an’isa noho ny maha mpikambana ao amin’ny fianakaviana politika ve izy io ka ho fototra ijoroan’ny maro an’isa marin-toerana sy masin-teny ? Amin’izay, inona no ho fihetsiny manoloana ny tolo-dalàna avy amin’ny fahefana mpanantanteraka, ary iza indray no hikambana ho mpanohitra manomboka eo ?
Eo am-piandrasana an’izany, ny fifidianana ny ben’ny tanàna dia zava-dehibe loatra ho an’ny demokrasia, ho an’ny Repoblika ary ho an’ny fampandrosoana, saingy mampalahelo fa efa tazana manangasanga sahady ka mamafy korontana ny marika mialoha lalana ny fifidianana « asafelipelika ».
Fampielezan-kevitra sava lalana sy famatsiam-bola Tamin’ny 15 janoary farany teo ny SeFaFi dia efa nampahatsiahy ny olana momba ny famatsiam-bolan’ny antoko1. Ny tantaran’ireo 200 tapitrisa Ariary, izay nambara ho famatsiana ny fampielezan-kevitry ny kandidà MAPAR, dia tsy niteraka adihevitra. Nefa raha tena marina tokoa fa natokana ho an’ny fampielezan-kevitra io vola io, dia ahoana àry ny momba ilay faneren’ny lalàna hanokatra kaonty manokana mba hampazava ny fiavian’ny famatsiam-bolan’ny antoko ?2 Mampiahiahy ny « fahitana » tamin’ny fomba mampitaintaina ireo baoritra feno vola, fa mampiahiahy toy izany koa ny fampielezan-kevitra mialoha ny fo-toana tahaka ny nataon’ny ny tenan’ny Filohan’ny Repoblika izay nidehadehaka niaraka tamin’ny solontenan’ny mpamatsy vola sy ny kandidà HVM ny 1° jiona teny amin’ny Biraon’ny ben’ny tanànan’Ambohidratrimo. Tahaka ireny efa voa- lamina mialoha ireny mihitsy ny fitsidihana tantaraina an-gazety atao any amin’ny faritra mba hialana amin’ny fandrarana ataon’ny lalàm-pifidianana tsy hitokana zava-bita amin’ny fomba ofisialy mandritra ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra3. Ny kompaniam-pirenena misahana ny fitaterana no ampiasaina, tsy eritreretina velively izay tombontsoany (mihitsoka ao an-tseranam-piara-manidina ny mpandeha mandritra izay fotoana izay), izany ve dia mifanaraka amin’ny lalàna izay mandrara ny fampiasana ny fitaovam-panjakana rehetra hanaovana fampielezan-kevitra ? 4
15 andro no tokony haharetan’ny fampielezan-kevitra, manomboka ny alakamisy 16 jolay amin’ny 6 maraina izany ary mifarana ny alakamisy 30 jolay amin’ny 6 maraina5. Ekena fa voafetra tokoa izany fotoanan’ny fampielezan-kevitra izany, ny fivoriana momba ny fifidianana mantsy dia vetivety foana dia mivadika ho lanonana, rindran-kira, fizarana « kadoa ». Fa ny mibaribary dia mahazo tombony ny olona manana fahefana sy fitaovana fampitam-baovao mandritra io fotoana tondroina ho mialoha ny fampielezan-kevitra io. Ny TVM sy ny RNM dia rakotry ny fanambarana politika avy amin’ny governemanta irery ihany nefa anie mbola tsy misokatra akory ny fotoana ara-dalàna hanaovana fampielezan-kevitra ary raran’ny lalàna koa ny manampahefana am-perin’asa tsy hanohana an-karihary ny kandidà6 izatsy na izaroa. Eo anatrehan’ny fihazakazaky ny fandrosoana teknolojika, indrindra eo amin’ny sehatry ny fampahalalam-baovao, dia heverina fa ilaina ny handinihana indray ny lalàna mikasika io fotoam-pifidianana io, tsy hoe mba hanalavana ny fotoanan’ny tabataba mankarenin-tsofina akory, fa mba hahalalan’ny mpifidy tsaratsara kokoa ny olona hofidiany sy ny programan’asany.
Fampitam-baovao ho an’ny mpifidy
Efa antomotra izao ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra, mbola tsy nampaha-fantarina ny mpifidy ihany anefa ny lisitry ny kandidà raikitra any amin’ny kaomina tsirairay avy. Toy izany koa, mbola tsy navoaka ho fanta-bahoaka koa ny lisitry ny mpifidy.
Nisy nandray andraikitra mba hanaovana fikaonan-doha mikasika ny anjara toerana sy iraka ampanaovina ny olom-boafidy any amin’ny faritra, ary ny KMF/CNOE dia nanentana ny olona eny an-toerana araka izay fitaovana teo am-pelatanany. Fa ny CENI-T dia namirapiratra tamin’ny tsy nandraisany anjara tamin’izany fanentanana ny olona any ifotony izany : porofo, raha nanatona azy ny kandidà avy eto amin’ny kaomina Antananarivo renivohitra mba hanontany izay azo atao na tsy azo atao mialoha ny fampielezan-kevitra (hetsika mialoha ny fampielezan-kevitra) dia valinteny tsy sazoka no nomen’ny mpikambana avy ao amin’ny CENI-T.
Ary eo mihitsy ny CENI-T no tena tsy mahefa ny andraikiny, toy izany koa ny mpampita vaovao natao ho mpanelanelana eo amin’ny mpiandraikitra ny fifidianana sy ny mpifidy. Tsy ampy tokoa angaha ny vola, fa ny tena tsy ampy indrindra dia ny finiavana, ny CENI-T dia tsy mampita afa-tsy vaovao faran’izay bitika dia bitika, vokatr’izany dia tsy afaka manefa ny adidiny araka ny tokony ho izy ny fiarahamonim-pirenena misahana ny fanabeazana ny olom-pirenena amin’ny fifidianana. Efa vonona any amin’ny fokontany ve ny lisitry mba hanamarinana ny mpifidy ? Voazara ve ny karatry ny mpifidy ho an’ny mpifidy vao voasoratra7 ? Efa vonona ve ny lisitry ny kandidà8 ? Ny santionany amin’ny « logo », hany fomba entin’ny mpifidy mahalala ny kandidàny amin’ny faha 31 jolay ho avy izao ve mba efa natao peta-drindrina ? Mahavariana fa ny mpamatsy vola dia miray tsikombakomba amin’izao tsy firaharahana ny mpifidy malagasy izao nefa, any ambany Andrefana rehetra, any rehefa misy fifidianana, dia zarazaraina amin’ny mpifidy fotsiny na ny afisy na ny lahatsoratra manakiana sy mampahafantatra vaovao isan-karazany.
Tahaka ny tsy misy te hahalala fa arakaraka ny mahatsara na tsia ny fandehan’ny fifidianana no mahatsara na tsia ny olom-boafidy, toy izany izao ny solombavambahoaka izay tsy misolo afa-tsy ny tenany fa tsy ny mpifidy azy velively rehefa tena dinihina. Ankehitriny dia efa nisy fanitsiana sasany nankatoavina (biletà tokana, vaomieram-pifidianana lazaina fa mahaleo tena, fitsinjarana mitovy ny fotoana itenenana amin’ny radio sy ny televiziona ary fandrarana ny fampielezan-kevitra amin’ny alalan’ny fitokanana ofisialy ny zava-bita), tonga koa ny fotoana hanatsarana ny fanapariahana ny vaovao amin’ny mpifidy, hanatanterahana ny mangarahara any amin’ny famatsiana ara-bola sy adihevitra momba hevitra mafonja mba hampihen-danja ny fanaovana fampisehoana an-tsehatra sy fizarana tiserita rehefa misy fifidianana. Fotoana indrindra izao, raha tsorina, hampiharana tsaratsara kokoa ny fepetra ara-dalàna manan-kery, mba handraisan’ny CENI-T tanteraka ny andraikiny dia ny fiantohana fifidianana marina, azo antoka ary mangarahara, ohatra fotsiny mikasika ny fitaizana ho olom-pirenena vanona sy ny fitsinjarana tsy miangatra ny fotoana itenenana any amin’ny radio sy ny televiziona. Ny fanamby
Hanana ny lanjany manokana ny fifidianana ben’ny tanàna ho avy izao : izy no hahalalana ny lanjan’ny hery politikan’ny andaniny sy ankilany avy, ary izy no hanendry ny ben’ny tanàna izay hantsoina hifidy ny roa ampahatelon’ny Loholona amin’ny alalan’ny fomba, indrisy, sady manahirana no saro-devonina9. Ho fananganana ny Antenimieran-doholona, ny Lalàmpanorenana dia milaza fa ny mpifidy dia tsy maintsy olom-boafidy navoakan’ny fifidianana tany amin’ny faritra isan-karazany (kaomina, faritra, faritany). Nefa koa misy fepetra navoakan’ilay lalàna vaovao mifehy ny Antenimieran-Doholona, andininy 127, izay manambara fa ny olom-boafidin’ny kaomina irery ihany no hany mifidy izay ho Loholona. Tsy mifanaraka amin’ny fihevitry ny Lalàmpanorenana io fomba io na dia efa nankatoavin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana aza (HCC), ary mampiharihary fa tsy ampy finiavana demokratika ny mpitondra antsika. Nahoana no nasiana an’io fanavahana io ?
Mandritra izany fotoana izany dia tsy misy mihitsy na iray aza fanambarana hentitra avy amin’ny governemanta mikasika ny fanatontosana fifidianana Loholona amin’ity taona 2015 ity, ary ny isan’ny faritra sy ny faritany, etsy an-danin’izany ilay fanitsiana ny lalàna mifehy ny tetibola tokony hamaritra ny vola natokana ho an’izany dia tsy nandalo tao amin’ny fivoriana ara-potoanan’ny Antenimieram-pirenena. Nefa ny Antenimieran-Doholona dia tsy maintsy miara-miasa amin’ny Antenimieram-Pirenena amin’ny fandaniana lalàna. Ny Filohan’ny Antenimieran-Doholona no mandimby ny Filohan’ny Repoblika raha misy ny tsy fahafahany. Ary anisan’ny anjaran’ny Antenimieran-Doholona ny mifidy olona roa ho mpikambana ao amin’ny HCC ary roa ho ao amin’ny Fitsarana Avo (HCJ).
Ankoatra an’izany, ny lalàna dia milaza fa ny Sefo fokontany dia fidiana ary maka ny toerany avy hatrany vantany vao vita ny fifidianana kaominaly. Ao amin’ny sehatr’ilay lalàna vaovao 2014-20 mikasika ny fanapariaham-pahefana, nahoana moa ny didy mikasika ny fokontany no tsy nampidirina tao amin’ny « laharam-pahamehana 100 andro » ho an’ny ministeran’ny Atitany sy ny Fanapariaham-pahefana ? Io anefa dia nety ho antony tena tsara niverenana tany amin’ny tsy maintsy nifidianan’ny olona ny Sefo fokontany.
Ny ben’ny tanàna dia olom-boafidy akaikin’ny vahoaka, ary izy no voalohany indrindra voakasiky ny fanapariaham-pahefana tena izy. Tena amin’izao fotoana izao indrindra izy no tokony homena ny fahefana sy izay ilaina rehetra mba hiasany any amin’izay sehatra tsy tokony hidiran’ny Fanjakana foibe. Zava-dehibe loatra ho an’ny mpifidy, noho izany, rehefa mifidy izay ho ben’ny tanànany izy, ny hahafahany mahalala izay kandidà afaka manatanteraka ny vinavinan’asany.
Mpikambana ao amin’ny fiarahamonim-pirenena ny SeFaFi ka tsy maintsy manambara etoana ny fahagagany. Ramatoa Ministry ny Fitsarana dia sahy nanendry samirery, olona iray tsy fantatry ny fiarahamonim-pirenena akory hisolo tena azy ao amin’ny Filankevitra Ambonin’ny Mpitsara (CSM), tsy hoe tsy nifampiresaka tamin’ny fiarahamonim-pirenena fotsiny izy fa mbola nolaviny koa ny kandidà natolotry ny Fivondronan’ny fiarahamonim-pirenena.
1 SeFaFi, « Fifidianana 2015, sedra ho an’ny Firenena tan-dalàna », 15 janoary 2015.
2 Andininy 37 sy 38–n’ny lalàna 2011-012.
3 Andininy 45-n’ny lalàna 2012-005. 4 Andininy 46-n’ny lalàna 2012-005.
5 Andininy 17-n’ny didy 2015-617.
6 Andininy 45-n’ny lalàna 2012-005.
7 Andininy 6 sy 7-n’ny didy 2015-617.
8 Ny CUA irery no nahazo vaovao betsaka mikasika ny kandidà. Fa any amin’ny kaomina manodidina akaiky an’Antananarivo tahaka an’Ambohibao, any amin’ny tanàn-dehibe ary any amin’ny kaomina ambanivohitra lavitra ny filazam-baovao any, dia tsy misy mihitsy filazalazana momba ny kandidà.
9 Jereo ny andininy 78 hatramin’ny 119-n’ny lalàna fehizoro vaovao lah. 2015-007 tamin’ny 3 marsa 2015.
Antananarivo, androany faha-04 Jolay 2015